तिमीले मनाइरहेको भ्यालेनटाइन डे’को इतिहास पनि त वियोग र विछोडकै कथा रहेको छ होइन र? « Naya Bato
तिमीले मनाइरहेको भ्यालेनटाइन डे’को इतिहास पनि त वियोग र विछोडकै कथा रहेको छ होइन र?
काठमाडौ। भ्यालेनटाइन डे अर्थात् प्रेम दिवशको काउन्टडाउन शुरु भैसक्यो। नेपालमा अहिले यो भ्यालेनटाइन डे यति धेरै लोकप्रिय भइसक्यो कि मानिसहरुले नेपालका अन्य कयौँ दिवसहरुलाई भन्दा पनि यस दिवसलाई विशेष प्राथमिकता र महत्वका साथ मनाइरहेका हुन्छन्। अझ भन्नुपर्दा प्रेम दिवश मनाउने हाम्रो संस्कार नै बनिसक्यो। बरु नेपालको राष्ट्रिय दिवशको दिन पसलहरु नेपालको झण्डाले त्यति रंगिएको हुदैन होला तर प्रेम दिवश आउनुभन्दा एकमहिना अगाडि देखिनै हरेक पसलहरुले प्रेम बेचिरहेका हुन्छन्।